Izinsiza ezikoleni | I-Foundation Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya Izinsizakalo zeZikole
Njengesikhungo sokupha ngocansi kanye nemfundo yobudlelwano, sinikela ngezinsizakalo ezisezingeni ezikoleni. Sisebenzisa ubufakazi bakamuva ngemiphumela yezithombe zocansi ezinganeni nakubantu abadala abancane ukuletha izifundo ezisebenzisanayo zabafundi abaneminyaka yobudala eyi-11 kuye kwengu-18 njengengxenye yohlelo lwezifundo lwePSHE / SRE. Sinikezela ngezinto ezifanele iminyaka yobudala zabafundi ukubasiza ukuthi bakwazi ukuzulazula endaweni eku-inthanethi namuhla. Ngokwazi imiphumela yezempilo, yezomthetho nobudlelwano bokuzitika ngocansi ezithombeni ezingcolile ze-inthanethi, bangakugwema ukubanjwa ugibe ngakho noma bafune usizo uma bekwenza. Sipha nabazali amandla okuba naleyo nkulumo nezingane zabo ekhaya ngalesi sihloko esikhohlisayo. Izingxoxo zethu ezirekhodwe nochwepheshe bezokwelapha nezomthetho kanye nabasebenzisi ababuyayo zenza izifundo zibe ngokoqobo ngokwengeziwe. Sisebenzisa amathuluzi okusayina futhi sisekela abazali nothisha. Izinto zokwakha nazo zilungele izikole ezenzelwe ukholo.
"UMariya wanikeza abafana bethu inkulumo enhle kakhulu ngesihloko sezithombe zobulili ezingcolile: kwakungalingani, okungenakugwetshwa nokwazisa kakhulu, okusiza ukuhlomisa abafundi bethu ngolwazi abayidingayo ukuze benze izinqumo ezinolwazi ekuphileni kwabo."
UStefan J. Hargreaves, uMninimandla ophethe iSominar, iTobridge School, iTonbridge
"Ngikholelwa ukuthi abafundi bethu badinga isikhala esiphephile lapho bengakwazi ukuxoxa ngokukhululekile ngezinkinga eziningi ezihlobene nocansi, ubudlelwane kanye nokutholakala kwezithombe zobulili ezingcolile ezitholakala kuyi-intanethi eminyakeni yobudala."
U-Liz Langley, iNhloko yoMuntu Wezemfundo NezeNhlalakahle, i-Dollar Academy
Izithombe zocansi ze-Intanethi zingaba nemithelela ehlukahlukene kwezempilo, ekuziphatheni nasekufinyelelekeni ezinganeni namuhla. Ungazi futhi ukuthi umthetho wase-UK wokuqinisekiswa kweminyaka ku-Digital Economy Act 2017 kulindeleke ukuthi uqalise ukusebenza ngasekupheleni kwe-2019. Uhulumeni awukaze umemezele usuku oluqondile. Umphumela uzoba ukwenza kube nzima ngokwengeziwe ezinganeni ukufinyelela lokhu okuqukethwe. Ochwepheshe bakhathazekile ukuthi kwezinye izingane esezivele zingabasebenzisi abasindayo kungahle kube nemiphumela ethile empilweni yezengqondo. Uma ucabanga ukuthi kukhona ubungozi kulokhu esikoleni sakho, mhlawumbe singakusiza.
Singabantu bobuhlobo bobulili kanye nobuhlobo bezemfundo ngokusebenzisa ucwaningo lwamuva lwe-neuroscience kanye nesayensi yezenhlalakahle kanye nemigomo yokufundisa. Ama-workshop ethu ochwepheshe aqinisekisiwe yiRoyal College of General Practitioners. Sinikeza izingqikithi zonyaka wonke ezingozini zezithombe zobulili ezingcolile zisetshenziselwa abafundi kusukela eminyakeni yobudala ye-12 kuya ku-18 njengengxenye yekharityhulam ye-PSHE noma yezakhamuzi. Indlela yethu yokuhlinzeka ubufakazi kubafundi ukubasiza ukuba basebenzise amakhono abalulekile okucabanga futhi bahlakulele isahlulelo sabo. Siphinde sinike amandla abazali ukuba bakwazi ukusebenzisana nezingane zabo ngokuphumelelayo ekhaya nokubhalisa izinsiza eziwusizo. Sivame ukumenywa yi-BBC TV neRadio kanye nomkhakha wezwe kazwelonke ukuphawula ngale ndaba.
I-Reward Foundation inikeza izifundo nezinkulumo ezihlukahlukene. Azikho izithombe zobulili ezingcolile eziboniswayo. Izingxoxo zihlotshaniswa ukuze zivumelane neqembu leminyaka. Sicela ubone imininingwane ngezansi. Ukuqaliswa kwezinhlelo zezifundo othisha okuzozisebenzisa kuzomenyezelwa emavikini azayo.
Abethuli bemisebenzi yethu ezikoleni nguNks uMary Sharpe, uMmeli, uDkt Darryl Mead noNkk Suzi Brown. UNks. Uchithe iminyaka eyisishiyagalombili njengomfundisi othweswe iziqu eNyuvesi yaseCambridge eqhuba imihlangano yokucobelelana ngolwazi esekela ukusebenza okuphezulu. UDkt Mead unguchwepheshe kwezobuchwepheshe bolwazi futhi uqeqeshwe njengomunye wama-Digital Champions Government kaHulumeni waseScotland. Kuze kube u-2015, wayeyiphini lenhloko yeNational Library yaseScotland. Uphinde abe uthisha oqeqeshiwe. USuzi Brown unguthisha onesipiliyoni seminyaka engu-7 sokufundisa i-PSHE ezikoleni zesiNgisi futhi ubengumsizi wendlu yenkosikazi eBishop's Stortford College, eHertfordshire iminyaka emihlanu. Singamalungu ohlelo lukaHulumeni waseScotland lokuvikela amaqembu asengozini futhi siphothule ukuqeqeshwa kokuvikelwa kwezingane.
Uma ungathanda ukucabangela izinsizakalo zethu esikoleni sakho, sicela uxhumane noMary Sharpe, ku mary@rewardfoundation.org noma ngocingo ku-07717 437 727.
Sisebenza kokubili amaqembu abesilisa nabesifazane abaxubekile. Izinto ezibonakalayo zihlukile-ezinobungane. Zonke izinkulumo nezifundo kungaba nemizuzu ye-40-60 enokude ifanele isikhathi sakho sokushiya sokushiya imibuzo.
Okujwayelekile Isingeniso Emthethweni Wezithombe Zobulili Ezingcolile kwi-Internet ku:
izingozi empilweni yomzimba nengqondo; ukutholakala kwemfundo, ubugebengu, ubudlelwane
izingxoxo zevidiyo nabashayeli abancane be-porn abatholile
indlela yokwakha ukuzinza nokuthi ungathola kanjani usizo
Ubulili kanye Nemidiya:
wazi izisusa zokukhangisa, ifilimu nezithombe ezingcolile
uqaphele imiphumela engaba khona yokulutha kocansi
ukuqonda zonke izinto zinikezwa inani - inani lomuntu lingaphezu kwanoma yini enye
baqonde izindaba zobulili ngoba abantu babalulekile
Ubulili kanye nobunikazi:
hlola ukuthi kusho ukuthini ukuba izidakamizwa (kufaka phakathi ulwazi mayelana nentuthuko yezocansi)
wazi futhi uqonde amalebuli ehlukene ezocansi asetshenzisiwe
ukuqonda umuntu ngamunye uhlukile futhi uyingqayizivele
qaphela ukuthi ubulili kanye namalebula noma ukuziphatha kobulili akusiqondi
Ubulili Nemvume - Inkululeko Yokukhetha:
wazi umthetho mayelana nokuvuma ngokocansi
cacisa ukuthi imvume isebenza kanjani ebuhlotsheni
wazi ukuthi umuntu ngamunye unenkululeko nokuzikhethela nokuthi angayisebenzisa kanjani
qondisisa umuntu ngamunye unenani
baqonde ukuthi ubudlelwano obuhle buvulela ukukhulumisana nokuhlonipha
indlela imboni yezithombe zobulili ezingcolile ezishintshile ngayo nomphumela walo kulesi sizukulwane
izindlela zokukhuluma nezingane zakho
imiphumela yokusetshenziswa ngokucindezela kwezithombe zobulili ezingcolile ezempilo, ukutholakala, ubudlelwane nobugebengu
amasu, ngokubambisana nesikole, ukusiza izingane ukuba zakha amandla okuzilimaza ezihlobene nezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi
Amanani: Ngezinkulumo £ 500 kanye nezindleko zokuhamba.
Amanye amasevisi ezikoleni
I-S2 ne-S4: Ukuthumela imiyalezo nge-sexting: izindaba zezempilo nezomthetho
Yeka ukuthi ubuchopho obusha bufunda kanjani
Okwenza ubuchopho obusakhulayo bukhungatheke ekukhulekeleni ngokweqile
Ucwaningo lwezomthetho mayelana namantombazane abhekene namacala okuthumela imiyalezo nge-sexting
Izingxoxo zevidiyo nabamlutha abancane be-porn abatholile
Ungakha kanjani ukuqina futhi kuphi ukuthola usizo
I-S5 / 6: Izithombe zobulili ezingcolile ezivivinyweni
Imiphumela ekufinyeleleni nasekukhiqizeni
Izingozi zokulutha ukuziphatha nokukhubazeka ngokocansi
Ukugxeka ithonya lomkhakha wezithombe zocansi njengengxenye 'yomnotho wokunakwa'
I-24-Hour I-Detox yeDivaysi kwimihlangano ye-2 c.Izinsuku ezingu-7 ngaphandle: Ukusebenza kuhlanganisa konke ukusetshenziswa kwe-intanethi
Ingxenye 1 ifaka ingxoxo yokuqala ngocwaningo mayelana "nokwakheka okukholisayo", ekwaneliseni ngokushesha nokuzithiba; amathiphu wokwenza ubuthi emzimbeni
Ingxenye 2, ukudingida lokho abakutholile ekuzameni le detox yamahora angama-24 phakathi nesonto lokungenelela
Bona izindaba zezindaba mayelana ne-digital detoxes / isikrini esidla S4 futhi S6 abafundi esikoleni sase-Edinburgh.
Ukuqwashisa ngeHarmy Potential kusuka ezingcolile zobulili (I-P7 kuphela):
Brain My Plastic: baqonde umsebenzi webuchopho obudala nobudala (ukufuna nokucabanga)
Yazi ukuthi ubuchopho buyasabela kanjani emvelweni futhi ufunda imikhuba
Qonda ukuthi isithombe se-intanethi se-intanethi singasikhathaza kanjani imicabango yami; yini okufanele ngiyenze uma ngibona amavidiyo nezithombe ezangikhathaza
Ingxenye 1 ihlanganisa ingxoxo yokuqala mayelana nokuthi i-intanethi ingasimisa kanjani ukufuna ukuxhuma nabanye futhi siphange ukulala kwethu; amathiphu wokwenza i-detox
Ingxoxo ka-Part 2 ngalokho ababhekane nakho bezama le detox yamahora angama-24 phakathi nesonto elingenelayo
Khuluma nabazali mayelana nobufakazi bamuva obuseduze nezilima kanye namasu okubhekana nezinkinga. Lokhu kusiza ukuphula ice ukuze uthole izingxoxo ekhaya
Amasu, ngokubambisana nesikole, ukusiza izingane zakha ukuzinza kwezidakamizwa ezihlobene nezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ngokukhethekile
Ngiyacela contact thina ngesilinganiso esibhaliwe samahhala. I-Reward Foundation inganikeza futhi ngezifundo ezenziwe ngokwezifiso ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Amanani ayi-VAT mahhala futhi azofaka konke ukuhamba ngaphakathi kwebhande laseScotland kanye nezinsiza.